सांसद सरिता गिरिले सांसद पद गुमाउने ! – Gorkhali Voice
सांसद सरिता गिरिले सांसद पद गुमाउने !
२०७७, १ असार सोमबार १६:२९
काठमाडौं । पार्टीको ह्वीप नमानेको र अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा समाजवादी पार्टीकी सांसद सांसद सरिता गिरिको सांसद पद धरापमा परेको छ ।
सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको नक्शालाई संविधानको अनुसूचीमा संलग्न गराउन गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा गिरिले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकी थिइन् ।उनले सांसद पद मात्र नभई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकाले पार्टीमा प्राप्त हैसियत पनि गुमाउनु पर्ने देखिएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कार्वाही हुने भन्दै यसअघि नै पार्टीका मुख्य सचेतकले चेतावनी दिइसकेका थिए । तैपनि गिरिले प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले उनको प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि योग्य नभएको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए ।
निशान छाप परिवर्तनका लागि गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएकी मात्र नभई उनले अलग्गै संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएकी थिइन् । संसदमा एक्लै दर्ता गराएकी संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा मत दिन पार्टीले दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेकाले उनी कार्वाहीमा पर्ने भएकी हुन् ।
आफूले दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर संविधानको अनुसूची संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले लगाएको ह्वीप नमानेकाले गिरिमाथि कार्वाही हुने समाजवादी पार्टीका एक नेताले बताएका छन् ।
गिरि समाजवादी पार्टीको खस आर्यको कोटाबाट समानुपातिक सांसद हुन ।संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको हो, त्यस्तो दलले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।